FAQs - Jade Teknolojia Co., Ltd
Ahoana no hahazoana antoka ny kalitaon'ny ny vokatra?
Efa nanorina tonga lafatra dia ahitana ny famatsiana filtrated hentitra tsara dia tsara sy mpivarotra entana isan-ho pitsapana talohan'ny nandaozany ny orinasa.
Ve ato aminareo misy mari-pankasitrahana izay ilaina eo amin'ny tsena?
Eny, ny vokatra rehetra dia ETL / CETL / taona / ROHS / CEC certificated. Afaka ihany koa ny fangatahana ny taratasy fanamarinana manokana izay no takina eo amin'ny tsena.
Ve ianao manome santionany? no maimaim-poana na tsia?
Santionany misy ho anao, fa tokony aloa. Misaotra noho ny fahalalana tsara fanahy.
Ahoana ny resaka fandoavam-bola?
T / T dia tena soso-kevitra, Paypal / Western Union / LC sy ny teny hafa ihany koa ny fandoavam-bola dia azo ekena
Afaka manao OEM ho antsika?
Eny, dia manome amin'ny OEM, ODM, OBM hitsena ny fitakian'ny isan-karazany ny raharaham-barotra.
Manao ahoana ny Warranty?
Tsy manome amin'ny 12 volana hatramin'ny entana miala fiantohana ny orinasa. Koa isika hanome amin'ny maharitra sy Ankehitriny-barotra fivarotana fanohanana, injeniera matihanina dia hanampy ny fahazoan-dalana hidirana ny vokatra sahaza indrindra rehefa avy nianatra ny mpanjifa 'fepetra, ary ampanjifaina vahaolana na inona na inona ny fampiharana manokana
Nahoana ny asa paompy amin'ny feo fifaliana sy ny maotera ho tena mafana?
Matetika izany no vokatry ny herisetra fitaterana, ny lavaka sy ny Fanodina bents rubs amin'ny stator rehefa misy maotera mandeha. Mba jereo raha ny fonosana dia tsara toe-javatra rehefa tonga paompy anao.
Nahoana ny paompy mitaona rano kely?
Raha ny paompy ihany koa ny manao feo hafahafa, rehefa zara raha Misarika ny rano, azafady disassemble ny paompy ary mijery raha toa ny impeller dia niraikitra tamin'ny vato kely. Mety hitranga any New nanao dobo rehefa mametraka ny paompy tsy misy madio ny vato kely. Raha toa ny tsy misy feo hafa, azafady jereo raha efa nametraka izany araka ny tokony ho, mety hitranga izany, rehefa ny vacuum fitaovana ho levona mandrakizay.
Ny paompy maotera fanatitra dorana, ahoana izany hitranga?
Mba jereo raha efa ratsy izay nampifandraisina mivantana ny malefaka amin'ny paompy malefaka manana lafiny roa.